Facebook post တစ်ခုကြောင့် ဒူဘိုင်းကို အလည်လာချိန် ထောင်ထဲဝင်ရမယ့် အမျိုးသမီး – Myanmar Mobile App
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်က မန့်ထားတဲ့ comment လေးတစ်ခုကြောင့် ဗြိတိန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ထောင်နန်းစံရမယ့်ကိန်းဖြစ်နေပါတယ်။
ယူအေအီးရဲ့ အာဏာပိုင်တွေဟာ ဒူဘိုင်းကို ခင်ပွန်းဟောင်းနာရေးအတွက် လာရောက်ခဲ့ချိန်မှာ အဲဒီအမျိုးသမီးကို ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၅၅နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး Laleh Shahravesh ဟာ သူမရဲ့ခင်ပွန်းဟောင်းကို နောက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် သူမကိုထားခဲ့တာဖြစ်လို့ “idiot” (အရူး) လို့ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဇနီးအသစ်ကိုလည်း “horse” (မြင်းမ) လို့ နောက်ထပ် comment တစ်ခုမှာ ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဟာတွေကို ယူကေမှာနေထိုင်နေတဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယူအေအီးရဲ့ တင်းကျပ်တဲ့ အင်တာနက်ဥပဒေကြောင့် လူမှုကွန်ရက်မှာ အသရေဖျက်တဲ့ မှတ်ချက်တွေရေးသားမယ်ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲရေးရေး အရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ထောင်နှစ်နှစ်လောက်ကျခံနိုင်တဲ့ အနေအထားရှိနေတဲ့အပြင် Shahravesh ဟာ ဒေါ်လာ၆၅၀၀၀ ကိုလည်း ဒဏ်ရိုက်ခံရနိုင်ပါတယ်။
Shahravesh ကတော့ အခုလို ဖြေကြားထားပါတယ်။ “ဆိုးဆိုးရွားရွား လုပ်မိခဲ့တာပေ့ါ။ သူ့ရဲ့ faecbook page မှာ ဇနီးအသစ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာ cmt နှစ်ခုကို ရေးခဲ့မိတယ်။ မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာလည်း သိပါတယ်။ ကောင်းကောင်းလေး ပြုမူခဲ့သင့်တာ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက စိတ်တိုနေတယ်။ သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရတာဆိုတော့ နာကျင်နေတာလည်း ပါတာပေ့ါ။”
Shahravesh ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈နှစ်တုန်းက ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ဒူဘိုင်းမှာ နေထိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ခုနှစ်မှာတော့ အသက် ၁၄နှစ်အရွယ်သမီးနဲ့ ယူကေကို ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။
ယူကေမှာရှိတဲ့ သူမမိသားစုတွေနဲ့ အတူနေထိုင်ဖို့စီစဉ်နေချိန်မှာပဲ သူမခင်ပွန်းဖြစ်သူက ဇာတ်လမ်းကို အဆုံးသတ်ချင်နေပြီလို ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ နောက်ထပ်မင်္ဂလာဆောင်တာကို တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ အသစ်စက်စက်မင်္ဂလာမောင်နှံနှစ်ယောက်ကို မြင်လိုက်ရတဲ့အတွက် Shahravesh ဟာ “I hope you go under the ground you idiot. Damn you,” လို့ ရေးသားခဲ့ပြီး “You left me for this horse” လို့ ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။
သတို့သမီးဖြစ်သူကတော့ ဒူဘိုင်းအာဏာပိုင်တွေဆီကို ဒီအကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
မတ်လ ၂၀၁၉ခုနှစ်မှာ နှလုံးရောဂါနဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ သေဆုံးသွားချိန်မှာတော့ Shahravesh ဟာ သမီးဖြစ်သူကို ဖြေသိမ့်ဖို့အတွက် ဒူဘိုင်းကို ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အဖမ်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့် သမီးဖြစ်သူကိုတော့ ယူကေကိုပြန်ပို့ခဲ့ပြီး အမျိုးတွေက စောင့်ရှောက်ကြမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Shahravesh ကို ပက်စပို့သိမ်းထားပြီး စစ်ဆေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒူဘိုင်းဟာ နိုင်ငံတကာခရီးသွားသူတွေအတွက် လည်ပတ်ချင်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ခုနှစ်မှာ ဧည့်သည် ၁၆မီလျံလောက် booking လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့ရဲ့ တင်းကျပ်လှတဲ့ဥပဒေတွေကိုတော့ လူသိနည်းကြပါသေးတယ်။
“ဒူဘိုင်းကို လာရောက်တဲ့ဧည့်သည်တွေဟာ နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာနေတဲ့ Facebook or Twitter post ဖြစ်နေပါစေ၊ ထောင်ကျသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ နားလည်သွားလောက်ပါပြီ။ ယူအေအီးရဲ့ ဆိုက်ဘာဥပဒေကတော့ အတော်လေးကို တင်းကျပ်ပြီး ပြင်းထန်တယ်ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။”
ယူကေနိုင်ငံခြားရုံးကတော့ ဒီအကြောင်းကို စတင်စုံစမ်းနေပါပြီ။
လှနျခဲ့တဲ့နှဈနှဈလောကျက မနျ့ထားတဲ့ comment လေးတဈခုကွောငျ့ ဗွိတိနျအမြိုးသမီးတဈဦးက ထောငျနနျးစံရမယျ့ကိနျးဖွဈနပေါတယျ။
ယူအအေီးရဲ့ အာဏာပိုငျတှဟော ဒူဘိုငျးကို ခငျပှနျးဟောငျးနာရေးအတှကျ လာရောကျခဲ့ခြိနျမှာ အဲဒီအမြိုးသမီးကို ဖမျးဆီးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အသကျ ၅၅နှဈအရှယျ အမြိုးသမီး Laleh Shahravesh ဟာ သူမရဲ့ခငျပှနျးဟောငျးကို နောကျထပျအမြိုးသမီးတဈယောကျအတှကျ သူမကိုထားခဲ့တာဖွဈလို့ “idiot” (အရူး) လို့ဖျောပွခဲ့ပွီး ဇနီးအသဈကိုလညျး “horse” (မွငျးမ) လို့ နောကျထပျ comment တဈခုမှာ ရေးသားထားခဲ့ပါတယျ။ ဒီဟာတှကေို ယူကမှောနထေိုငျနတေဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှဈမှာ ရေးသားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ယူအအေီးရဲ့ တငျးကပျြတဲ့ အငျတာနကျဥပဒကွေောငျ့ လူမှုကှနျရကျမှာ အသရဖေကျြတဲ့ မှတျခကျြတှရေေးသားမယျဆိုရငျ ဘယျနိုငျငံမှာပဲရေးရေး အရေးယူပိုငျခှငျ့ရှိပါတယျ။ ထောငျနှဈနှဈလောကျကခြံနိုငျတဲ့ အနအေထားရှိနတေဲ့အပွငျ Shahravesh ဟာ ဒျေါလာ၆၅၀၀၀ ကိုလညျး ဒဏျရိုကျခံရနိုငျပါတယျ။
Shahravesh ကတော့ အခုလို ဖွကွေားထားပါတယျ။ “ဆိုးဆိုးရှားရှား လုပျမိခဲ့တာပေ့ါ။ သူ့ရဲ့ faecbook page မှာ ဇနီးအသဈနဲ့ပတျသတျပွီးတော့ စိတျမခမျြးမွစေ့ရာ cmt နှဈခုကို ရေးခဲ့မိတယျ။ မလုပျသငျ့ဘူးဆိုတာလညျး သိပါတယျ။ ကောငျးကောငျးလေး ပွုမူခဲ့သငျ့တာ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက စိတျတိုနတေယျ။ သစ်စာဖောကျခံလိုကျရတာဆိုတော့ နာကငျြနတောလညျး ပါတာပေ့ါ။”
Shahravesh ဟာ လှနျခဲ့တဲ့ ၁၈နှဈတုနျးက ခငျပှနျးဖွဈသူနဲ့ လကျထပျခဲ့ပွီး ဒူဘိုငျးမှာ နထေိုငျခဲ့ပွီး ၂၀၁၆ခုနှဈမှာတော့ အသကျ ၁၄နှဈအရှယျသမီးနဲ့ ယူကကေို ပွနျသှားခဲ့ပါတယျ။
ယူကမှောရှိတဲ့ သူမမိသားစုတှနေဲ့ အတူနထေိုငျဖို့စီစဉျနခြေိနျမှာပဲ သူမခငျပှနျးဖွဈသူက ဇာတျလမျးကို အဆုံးသတျခငျြနပွေီလို ပွောခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျမှာတော့ နောကျထပျမင်ျဂလာဆောငျတာကို တှလေို့ကျရပါတော့တယျ။ အသဈစကျစကျမင်ျဂလာမောငျနှံနှဈယောကျကို မွငျလိုကျရတဲ့အတှကျ Shahravesh ဟာ “I hope you go under the ground you idiot. Damn you,” လို့ ရေးသားခဲ့ပွီး “You left me for this horse” လို့ ပေါကျကှဲခဲ့ပါတယျ။
သတို့သမီးဖွဈသူကတော့ ဒူဘိုငျးအာဏာပိုငျတှဆေီကို ဒီအကွောငျး တငျပွခဲ့ပါတယျ။
မတျလ ၂၀၁၉ခုနှဈမှာ နှလုံးရောဂါနဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူ သဆေုံးသှားခြိနျမှာတော့ Shahravesh ဟာ သမီးဖွဈသူကို ဖွသေိမျ့ဖို့အတှကျ ဒူဘိုငျးကို ချေါလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ အဖမျးခံရတဲ့အတှကျကွောငျ့ သမီးဖွဈသူကိုတော့ ယူကကေိုပွနျပို့ခဲ့ပွီး အမြိုးတှကေ စောငျ့ရှောကျကွမယျလို့ သိရပါတယျ။
Shahravesh ကို ပကျစပို့သိမျးထားပွီး စဈဆေးနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
ဒူဘိုငျးဟာ နိုငျငံတကာခရီးသှားသူတှအေတှကျ လညျပတျခငျြစရာနရောတဈခုဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၈ခုနှဈမှာ ဧညျ့သညျ ၁၆မီလြံလောကျ booking လုပျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး သူတို့ရဲ့ တငျးကပျြလှတဲ့ဥပဒတှေကေိုတော့ လူသိနညျးကွပါသေးတယျ။
“ဒူဘိုငျးကို လာရောကျတဲ့ဧညျ့သညျတှဟော နှဈပေါငျးဘယျလောကျကွာနတေဲ့ Facebook or Twitter post ဖွဈနပေါစေ၊ ထောငျကသြှားနိုငျတယျဆိုတဲ့အကွောငျးကိုတော့ နားလညျသှားလောကျပါပွီ။ ယူအအေီးရဲ့ ဆိုကျဘာဥပဒကေတော့ အတျောလေးကို တငျးကပျြပွီး ပွငျးထနျတယျဆိုတာ သိစခေငျြပါတယျ။”
ယူကနေိုငျငံခွားရုံးကတော့ ဒီအကွောငျးကို စတငျစုံစမျးနပေါပွီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ လလောက်က Nokia အနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ TA-1131 ဆိုတဲ့မော်ဒယ်နံပတ်နဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးကို စာရင်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း ထပ်မံပြီးတော့ TENAA မှာအဲ့ဒီမော်ဒယ်နံပါတ်နဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးအကြောင်း ထွက်လာပါတယ်။ Nokia9ဖုန်းလို့သတ်နိုင်ပြီး ထွက်ရှိလာတဲ့ list မှာဖုန်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ အပြည့်အစုံ ပါရှိလာပါတယ်။ TENAA ပြထားတဲ့ ဖုန်းရဲ့ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာတော့ Nokia9ဖုန်းမှာ 6.2 လက်မscreen နဲ့ဖြစ်ပြီး အတိုင်းအတာကတော့ 154.8 × 75.76 × 7.97 mm ရှိမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ 4GB RAM မှာ 64GB memory နဲ့ဖြစ်ပြီး၊နောက်ထပ် မော်ဒယ်တခုမှာတော့ 6GB RAM နဲ့ 128GB […]
နောက်ထပ်ထွက်ရှိတော့မည်မဟုတ်တော့တဲ့ Galaxy J